Buza i-Semalt Expert: Yiyiphi i-Google Analytics Ukubeka Uphawu lokuThetha ngeeShishini
I-Google yenye yeyona injini eyaziwayo kunye nefuthe injini yosesho . Sekutshilo nje ukuba bonke abasebenzisi be-Analytics baya kukwazi ukufikelela kwiingxelo zokulinganisela i-industry ngokusebenzisa ideshibhodi zabo kwiinyanga ezizayo. Ezi ngxelo maziyeke i-webmasters ingqiqo yewebhusayithi yazo. Ngaphezulu, bafumana ingcamango yento ehamba ngayo kule mihla nendlela yokufumana i-traffic enamandla kwiindawo zabo ngokwenza kakuhle emehlweni e-Google.
U-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo yoMthengi we-12 (Semalt , ukhangele apha kwezinye iingcebiso eziphosakeleyo nezizilungeleyo malunga nalo .
Kuyinyaniso ukuba iingxelo zokubeka uphawu lokubakho azifumaneki kubo bonke abanikazi bewebhu. Nangona kunjalo, le yindlela efanelekileyo yokubonelela ngolwazi ngezinga lokuhlawula, iiseshoni kunye nomgangatho wamaphepha akho. Ungakwazi nokuba uluhlobo luni lwezikhonkco eziphukileyo ezikhoyo kunye nendlela yokuphucula ngayo. Ngaphezulu, abasebenzisi bafumana ingcamango yokuba zeziphi iifowuni zabo abazisebenzisayo ukujonga iiwebhusayithi zabo. I-Google iphinde ibonise iimephu kunye neendawo zokufudumala ngeengxelo zokumisela ukunika abasebenzisi bayo ithuba elininzi lokuphucula.
Kubalulekile ukunika uphawu lokubeka uphawu lokubonisa ukuba yile ndlela kuphela yokufikelela kwiedatha phantsi kwecandelo labaphulaphuli kwideshibhodi yakho ye-Analytics..Phantse zonke i-webmasters ezinkulu zisebenzisa iirekhodi zokubonisa, kuquka i-Twiddy, yinkampani yokuhamba. Ichonga amathuba okukhula kwishishini ngokusebenzisa iingxelo zokutshekisha. Ngokutsho kwe-CEO ye-Twiddy uRosss Twiddy, bafumana iziphumo kunye neengxelo ze-analytics kunye neendlela zokulinganisa ukuba babe neengcamango zento ekufuneka bajolise kuyo kunye nokuba bangaphi abantu abanomdla kwiimveliso kunye neenkonzo zabo.
Sebenzisa i-Analytics Benchmarking Yoshishino Lakho
Ukuba uqhuba ibhizinisi elikhulu okanye inhlangano encinci, kufuneka usebenzise i-analytics benchmarking kwinkampani yakho. Inceda abashishini begxininisa kwizinto ezihambayo, yintoni enokuyenza ibhetele kubo nendlela yokuphucula amashishini abo kunye neziphumo ezifunwayo. Kwakhona kuqinisekisa ukuba sinemininingwane echanekileyo. Ngaphezu koko, sinokuhlalutya ngokulula kwaye sivavanye izinga lokungena kwiindawo zethu. Kuze kube ngoku, i-Google Analytics isinike iinkcukacha ezininzi malunga nendlela ethu amaziko enza ngayo. Nangona kunjalo, ukuhlaziywa kwe-analytics yindlela yokujonga indlela esinokuphucula ngayo iindawo zethu kunye nendlela yokubeka iinjongo ezifanelekileyo.
Ukuqwalasela phambili amathuba okuphucula
Ulifanisa njani indawo yakho kunye nabanye abashishini? Yiloo nto ufanele uyiqwalasele. Ukusebenzisa iingxelo zendlela yokubonisa, unokukhawuleza ufumanise ukuba yeyiphi imimiselo yemizamo yakho yesayithi efuna iziphumo ezingcono. Ngaloo ndlela, uya kusindisa ixesha elide kwaye unokugxila kwizinto ezilungileyo. Xa unokufikelela kulezo ngxelo, unokukwazi ukulinganisa ukusebenza kwendawo yakho kwaye unokubaluleka kwamathuba okuphucula kakhulu.
Beka iinjongo ezifanelekileyo
Kukhuselekile ukuthetha ukuba iingxelo zekhonkco zinokukunceda ubeke iinjongo ezifanelekileyo. Oku kunokukunika ulwazi malunga nokuziqhathanisa kangcono kunye noontanga bakho nendlela yokuwahlula kwishishini. Kufuneka ukuba isantya sokuhlawula isayithi asigqithisi ama-50 ekhulwini. Ukuba kwenzeka, ke kukho amathuba okuba ulahlekelwe ziintlobo ezininzi zeendwendwe kunye nesimo sakho kwiGoogle inokuchaphazeleka Source .